Njengamanye amazwe amaningi emhlabeni wonke kuwo wonke umlando, izwe laseCanada lenze ukuqothulwa kohlanga kwabantu bomdabu.
Ukuletha lezi zindaba kwakukhungathekisa kakhulu isizwe sakithi kanye nami uqobo. Ngiyingxenye yesizwe samaNdiya i-Abenaquis futhi nginezakhi zofuzo ezivelele neziqhenyayo ezenzeka kimi uqobo, lokhu kusuka ohlangothini lomndeni wami womama.
Iyiphi indlela engcono yokuveza imizwa yakho ngaphandle kwesenzo sokwenza ubuciko nokwenza izindlela ezingenasiphithiphithi nezinyantisayo zabanye abantu zibonwe izizukulwane ezizayo. Isicelo sokufunda ngomlando, ngethemba lokuthi ngeke siphinde sisebenzele ukuhlanganisa thina sonke.
Umbala okhethwe ngemuva ngulolintshi ukukhombisa umbala obonakalayo Wabantu Bomdabu lapha eCanada, ikakhulukazi.
Nginqume ukukhetha i-Orange njengesizinda esikhulu sendwangu. Lo mbala ngokwemvelo wakhethwa ukuthi amele Amasiko Omdabu amaningi. Kunenqwaba yeminye imibala egeleza ngendwangu ekhombisa ubunye phakathi kwabantu abakha umhlaba wonke. Futhi, futhi ikakhulukazi abomdabu ekubuyiseni amasiko abo.
Kubantu Bomdabu, ukusetshenziswa kopende womzimba nobuso kungokomlando futhi kubaluleke kakhulu, kukomoya kakhulu futhi kunamandla. Lesi siko sibuyele emuva ezinkulungwaneni zeminyaka futhi ezizukulwaneni eziningi lo mkhuba ubulokhu ukhona futhi wenziwa ngendlela yomkhosi.
Ngisebenzise inqubo yokucindezela ukushisa ezingxenyeni ezithile zendwangu ukukhombisa izithombe zangempela zemicimbi eyenzeka ngesikhathi sokuqothulwa kwamasiko eminyakeni edlule. Le nqubo ikhombisa izehlakalo zokuphila kwangempela kumqapheli, okuqhubeka kushaqise umbukeli ekuboneni izinhlekelele ezenzekile. Lezi zingcezu zendwangu zabe sezinamathiselwe kwindwangu enkulu esikhumbuza ngokuhlukaniswa okuqhubekayo, ukungazi iqembu nokuntuleka komphakathi wokwamukela kuvame ukubeka kubantu bomdabu nakwamanye amasiko amaningi. Akukho ukubekezelelana kobuzenzisi.
Akukho engingakuthanda ngaphandle kobuciko obufana nalesi siqephu ukuze kukhanye uthando, inhlonipho nokubekezelelana.